Soo dejisan PhotoFiltre 10.14.1 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaTifatiraha sawiradaPhotoFiltre
Bogga rasmiga ah: PhotoFiltre
PhotoFiltre – editor image ah in uu leeyahay qalab waxtar leh in la abuuro, edit iyo images-socodka. Software wuxuu taageeraa muuqaalada tafatir caadiga ah, sida soo dhalaasho, ka duwan, coloration, mudadda, saxo gamma iyo sida diirada farshaxanka: watercolor, pastel, khad Hindiya iwm PhotoFiltre ogolaanaya processing Dufcaddii halka codsanaya shaandheeyaa, resizing, la qabsiga nolosha iyo diinta tiro badan oo sawiro ah. Software wuxuu ka kooban yahay qaybo oo awood isticmaalka oo hore loo sameeyey si ay u abuuraan effects kala duwan. PhotoFiltre kuu ogolaanayaa inaad si ay u baahiso fursadaha ay isku xidha plugins.
Set A weyn ee qalabka si ay ula shaqeeyaan images
Doorasho balaadhan oo ah saamaynta iyo sida diirada
Awoodda ay u isticmaalaan marto
Ku xiridda plugins
Soo dejisan PhotoFiltre
Faallo ku saabsan PhotoFiltre
PhotoFiltre Xirfadaha la xiriira